किन अत्यधिक महंगो छ यी चार कुरा जापानमा ? - Nepal Japan
नेपाली समय : 10:14:43
जापानी समय : 01:29:43
किन अत्यधिक महंगो छ यी चार कुरा जापानमा ?
22 May, 2019 21:33 | जापान | comments | 59400 Views
जापान एक सुखी र सम्पन्न राष्ट्र हुनुकाा साथै यहाँ प्रायः हरेक कुरा महँगो हुन्छ । तर महंगामा पनि अत्यधिक महंगा केही वस्तुका बारेमा यहाँ जानकारी दिइनेछ ।
जापानको अपेक्षाकृत स्थिर अर्थव्यवस्थाका कारण यहाँको बस्तुभाउमा उतारचावाव आउनु स्वभाविकै हो ।
जापानमा सिनेमाको टिकट, पिज्जा, बुलेट ट्रेनको टिकट र मोबाइल फोन अन्य राष्ट्रहरुभन्दा निकै महँगो रहेको छ ।
सर्वप्रथम कुरा गरौं सिनेमाको । जापानमा सिनेमाको टिकट महँगो हुने गरेको छ । फिल्मको एक टिकटलाई जपनामा एक हजार आठ सय येन अर्थात् १६.५० अमेरिकी डलर पर्दछ जुन अरु राष्ट्रको तुलनामा निकै महँगो हो ।
जापानको सिनेमा हलको इतिहास १०० वर्षभन्दा पुरानो छ । जापानमा टिकट महँगो भए पनि त्यसमा कुनै पेय पर्दार्थ र खाजा सामेल हुँदैन । एक व्यक्तिले आफ्नो साथीसंग सिनेमा हेर्न गएको बेला पेय पदार्थ र पपकर्नको लागि थप एक हजार येन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै जापानका मुख्य खाद्य पर्दार्थहरु विपरीत, मल्टीप्लेक्सको भाग आकार निश्चित रूपमा अमेरिकी धारणामा आधारित हुनेछ ।
त्यस्तै पिज्जा जापानमा अन्य देशको तिलानामा केही महँगो रहेको छ । जापानमा एक हजर येनदेखि ४ हजार येनसम्मका पिज्जाहरु पाइन्छ । जापानमा पिज्जाको मूल्य बढी हुनुमा पिज्जामा प्रयोग हुने बस्तुहरु आयात गर्न निकै खर्च लाग्नाले हो ।
तर अहिले जापानमा वान क्वाईन पिज्जा प्रख्यात रहेको जसको मूल्य पाँच सय येन रहेको छ । पिज्जाहरु प्रायः पिज्जा हट, डोमीनोज र तिनीहरुको घरेलु प्रतिद्वन्द्वीहरु जस्तै पिज्जा ला जस्ता मूल्यहरू घटाउन मान्दैनन् जुन ब्रान्ड स्नोबर्बीको रूप जस्तो देखिन्छ ।
३. शिंकानसेन बुलेट ट्रेन
शिनकानशेन बुलेट ट्रेन जापानको एक चर्चित बुलेट ट्रेन हो । तर यस ट्रेनको टिकेट मूल्य महँगो रहेको छ । जसरी कम लागतवाला वाहक (एलसीसीएस)को उदयले हवाई जहाजको टिकट मूल्यहरू घट्दै आएको छ र अतिरिक्त प्रतिस्पर्धाले कउच र रात्री बससेवामा समान मूल्यको प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ तर जापान रेल (जेआर) सेवाले भने आफ्नो मूल्य घटाउने विषयमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।
४. मोबाइल फोन
विगत लामो समयदेखि जापानमा मोबाइल फोन र यसका अन्य सामग्रीहरु अत्यधिक महंगा छन् । यसका केही विशेष कारण छन् । मुख्यतः सफ्टबैंक, डोकोमो र एयूलाई मिलाउने हो भने फोनको सबै बजार नियन्त्रणमा छ । यी तीन कम्पनीबाहेक अर्को विकल्प छैन । यिनीहरुबीचको मिलेमतोमा मोबाइल फोन र यसको सेवा अत्यधिक महंगो छ ।